महिलाले यौन आनन्द कसरी प्राप्त पर्छन ? « Sajhapage24
महिलाले यौन आनन्द कसरी प्राप्त पर्छन ?
प्रकाशित मिति: July 27, 2018
यस किसिमको प्राक्क्रीडाले यौन आनन्दलाई चरम विन्दुमा पुर्याउन सहयोग गर्नेमात्र नभई एक–आपसमा राम्रो सञ्चार गरी आपसी समझदारी बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । आपसी समझदारीका कुरालाई धेरै दम्पतीले यथार्तमा बेवास्ता गर्ने भए पनि वैवाहिक जीवनको धुरीको रुपमा यसले कार्य गर्दछ । यसो गर्न सकिएमा यौन सम्पर्कलाई वास्तविक अर्थमा सम्भोग बनाउन सकिन्छ । सम्भोग अर्थात् ‘समंभोग’ जसको अर्थ दुवै जना यौनसाथीले समान रुपमा यस सुखलाई महसुस पाऊन् । एजेन्सीको सहयोगमा